Ikhamphani ye-RFC ye-Printing Case China Manufacturer
Incazelo:Umshini wokunyathelisa we-Case Case,Icingo lefoni eliprinta iBhizinisi,Ifoni Yocingo Lokunyathelisa Inhlamvu
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Ifoni yephrinta yefoni > Ikhamphani ye-RFC ye-Printing Case
Ukunyatheliswa kwecala lefoni ngefoni ye- Case Case Printer , isitayela esiyingqayizivele somshini wokunyathelisa ekhaya. Kusukela ku-art yobudala yasendlini, kuhlanganiswe ne-graffiti yaseYurophu neyamaMelika, ngabaningi abaningi be-avant-garde ekwakhiweni kwesiko samanje.
Ikhamphani ye- RFC ye-Case Printing Company uhlobo oluthile lwezinto ezingekho "othintana nabo" ze-jet uhlobo lwedijithali, uhlelo lwayo lubanzi kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zoMshini Wokunyathelisa Umshini Wefoni yethu RF-A3UV:
2. I- Case Case Ukuphrinta Ibhizinisi ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Ifoni Yocingo Lokunyathelisa Inqwaba I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Umshini wokunyathelisa we-Case Case Icingo lefoni eliprinta iBhizinisi Ifoni Yocingo Lokunyathelisa Inhlamvu Umshini wokunyathelisa we-Foam Umshini wokunyathelisa we-A3 Umshini Wokunyathelisa we-Latte Umshini wokunyathelisa we-T we-T Umshini wokunyathelisa we-Digital